Shirka golaha amniga Qaranka oo weli ka socdo Muqdisho iyo qodobo weli la isku mari la’yahay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Shirka golaha amniga Qaranka oo weli ka socdo Muqdisho iyo qodobo weli la isku mari la’yahay
Shirka golaha amniga Qaranka oo ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa weli ka socdo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Shirkaasi oo 5-tii bishaan ka furmay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa la filaayay in muddo labo maalmood ah lagu soo gaba-gabeeyo, balse uu dib u dhac ku yimid kadib markii la isku mari waayay qodobo dhowr ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo shirkaasi markii hore shir guddoominayay ayaa joojiyay guddoominta shirkaasi, wuxuuna badelkiisa arrintaasi u xil saaray ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa la sheegayaa inuu shirka la yimaaday dhowr qodob oo keentay in shirka la isku mari waayo.
Qobada ugu waaweyn ee shirka weli la isku mari la’ yahay ayaa waxaa kamid ah:-
1- Qaabka loo qeybsanayo ciidamada Qaran ee xoogga dalka iyo cidda yeelaneysa maamulka ciidamadaas
2- Qeybsiga Kheyraadka, siiba shatiyada la siiyo maraakiibta kaluumeysiga shisheeye
3- Qeybsiga dakhliyada kasoo xarooda illaha dhaqaalaha dalka
4- Xiriirka maamul goboleedyada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya
Shirkaan ayaa markii uu soo gaba-gaboobo la filayaa in laga soo saaro qodobo lagu wada heshiiyay.